Madaxda Dalka oo ka hadlay Dilalka lagu hayo Howlwadeenada Warbaahinta dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Madaxda Dalka oo ka hadlay Dilalka lagu hayo Howlwadeenada Warbaahinta dalka
Muqdisho (KON) - Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul u cambaareeyey falkii isku dayga dilka ee loo geystay Wariye Maxamed Maxamuud Timacadde.
Madaxweynaha wuxuu isla markaana hay’adaha amniga ku amray in sharciga la horkeeno cidii isku dayga dil u geystay Timacadde oo haatan isbitaal ugu jira dhaawacii ka soo gaaray falkaas arxan la’aanta ah.
Madaxweynaha ayaa ugu danbeyntii yiri ”Looma dulqaadan doono falalka sida tooska ah loogu raadsanayo wariyeyaasha Soomaaliyeed, dowladdana waxaa ka go’an in maxkamadda la soo hortaago cid allaale iyo cidii lagu helo inay ka danbeeyaan falalka noocan oo kale ah.”
RW Saacid oo ka hadlay Dilka Timacadde
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” ayaa si kulul u cambaareeyey beegsiga lagu hayo howlwadeenada warbaahinta dalka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay dhaawaca ay maanta kooxo hubeysani u geysteen wariye ka howlgala TV-ga Universal, laguna magacaabo Maxamed Maxamuud Timacadde, waxaana uu ku tilmaamay falkan mid ka baxsan bani’aadannimada isagoo caafimaad dag dag ah u rajjeeyay wariyaha la dhaawacay.
Afhayeenka Xukuumada Soomaaliya Mudane Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo saaka booqday dhaawaca wariye Timacade oo la dhigay isbitaalka Madiino oo gurmad caafimaad loogu fidinayay wariyaha ayaa sheegay in falalka noocan oo kale ah ay yihiin kuwo la doonayo in sawir khaldan looga bixiyo amniga ka jira dalka.
Dhanka kale, afhayeenka xukuumada ayaa xusay in kooxaha nabadiidka iyo qaswadayaashu ay mar kasta doonayaan inay aamusiyaan warbaahinta xorta ah ee dalk, dawladduna ay la xisaabtami doonto dhagar-qabayaasha gaysanaya dilalkani.